Kulamo Siyaasadeed Oo Ka socda Muqdisho – Radio Baidoa
Kulamo Siyaasadeed Oo Ka socda Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay kulamo gaar gaar ah ku yeeshay Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sh Axmed, Xasan Cali Kheyre iyo Musharaxiin dhowr ah oo soo gaaray Caasimadda dalka.
Kulamada ayaa markii hore dhexmaray hoggaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, Arrimaha Doorashooyinka 2020/21 iyo shir la filayo inuu Muqdisho uga furmayo Musharaxiinta xilka Madaxweynaha.
Madasha Xisbiyda Qaran ayaa la sheegay inay diideen in Musharax Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Kheyre uu kasoo qeyb galo Shirka Midowga Musharixiinta uga furmaya, waxaana diidmadaas ka war gelay Musharax Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale Madaxda Madasha ayaa la tilmaamay in Kheyre ku cadaadiyeen in uu marka hore cudur daar ka bixiyo wixii dhacay saddexdii sano ee la soo dhaafay, intuu ka midka ahaa nidaamka Madaxweyne Farmaajo qeyb ka ahaa, isla markaana mowqifkiisa caddeeyo.
Intaas kadib Kheyre ayaa si deg deg ah ugu tegay Madaxweyneyaashii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, iyagoona kulamo saacado dhowr ahn qaatay oo weli xog dheeraad ah laga helin.
Dhinaca kale Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay Madaxweynihii hore ee Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sh Aadan iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, kaasi oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha Doorashada dalka.
Kheyre Oo Raali-Gelin Buuxda C/Raxmaan C/Shakuur Ka Siiyay Weerarkii 2017